Iyo iPhone 9 ichaburitswa rinhi kuUK, uye ichaita zvakasiyana sei kubva kunhare dzanhasi maererano nezvimiro, dhizaini uye tech specs? Uye zvakadii nezve mafoni matsva Apple anotanga mu2020 uye kupfuura? Ko iyo smartphone yeramangwana ichaita sei?
KuMacworld tinopedza nguva yakawanda tichizvibvunza nezvechizvarwa chinotevera cheApple zvishandiso (uye kana iwe uchigovana yedu yekuda kuziva, tarisa pane edu iPhone 7s, iPhone 8, iPad Mini 5, iPad Pro 2, Apple Watch 3 uye Apple Car makuhwa zvinyorwa). Asi dzimwe nguva inobhadhara kutora nhanho kumashure uye kufunga nezve iyo yakareba kwenguva, uye yakakura mufananidzo. Tekinoroji iri kuenda kupi? Ramangwana rakamira sei? Uye mafoni efoni eApple acharatidzika sei muna 2018, muna 2020, muna 2030 uye mberi?
Muchinyorwa chino tinokurukura dzimwe dzenzira dzinogona kutorwa nehunyanzvi hwekombuta mumakore anotevera, kutanga neiyo iPhone 9, iyo nemaitirwo azvino inofanirwa kuoneka pakati pegore ra2018 na2020. (Izvi zvese zvinoenderana kana Apple ichiramba ichiburitsa 'S' kirasi kukwidziridzwa pakati peiyo yakazara-nhamba yekuvandudzwa.) Sezvo isu tichienderera kumberi mune ramangwana kufungidzira kwedu kuchaita nekukosha kuve kwekufungidzira, uye dzakawanda dzenzira idzi pasina mubvunzo dzinozopedzisira dzave nzira dzemapofu. Asi isu tinofara kupfeka magogorosi edu emangwana uye kuita fungidziro pamusoro pemaitiro atiri kutarisira mumakore mashoma anotevera. Kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi mhando yeiyo iPhone iwe yauchange uchisimudza mune ramangwana, verenga mberi.
iPhone 9 uye kupfuura: Bhatiri & kuchaja zvinoitika
Zvakare uye zvakare iyo UK Tech Weekly Podcast inodzokera kumusoro wenyaya we 'peak smartphone': iyo pfungwa yekuti iyo smartphone yegoridhe nguva yekukurumidza tekinoroji kufambira mberi uye yakafara ruzivo misiyano (pakati pechizvarwa chimwe nechinotevera, kana pakati pemugadziri mumwe neumwe) zvapera.
Iyo smartphone yave kuita commoditised, uye kune mashoma chete, iterative misiyano pakati pefoni iyo ichangotanga uye iyo yawakatenga gore rapfuura - nekudaro kushoma kukurudzira kuita kusimudzira. Smartphones izvozvi zvave 'zvakaringana'.
Zvakanaka, pamwe. Zvichida chikuru chinokwanisa kukura nzvimbo - zvakadaro, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvinopesana, chimwe chezvakanyanya kuregeredzwa parizvino - hupenyu hwebhatiri. Bhatiri tech inoramba ichiita zvirinani, asi vagadziri vema smartphone (uye Apple vane mhosva yeizvi sechero munhu) vanoramba vachipwanya zvimwe zvinesimba-simba mune chassis yakatetepa saka hupenyu hwebhatiri hunopedzisira hwagara zvakangofanana.
Mumakore mashoma anotevera, isu tinofungidzira, hupenyu hwebhatiri huchave hwanyanya kukoshesa kune vanogadzira foni nevatengi. Zvimwe izvi imhaka yekuti nhare dzave kuita dzakatetepa uye nekukurumidza sezvingave zvingangoda chero munhu; asi pamwe imhaka yekuti mamwe anotonhorera matekinoroji mabudiriro ari kutanga kuuya mukati mekusvikirwa nenharembozha yevatengi mabhajeti.
Akaiswa masero ebhatiri
Imwe runyerekupe runoramba ruripo rwekuti Apple ichatora tech bhatiri iyo yaakagadzirira yekutanga 12-inch MacBook (uye yakachengeterwa iyo 2016 version) - uko kwakamonyororwa, akaturikidzana mabhatiri mayuniti akaiswa mukati mechasisi kuitira kuti atore chero inokwanisika inchi yenzvimbo - uye shandisa izvi kusvina huwandu hwebhatiri mukati meiyo yakamisikidzwa kana kunyangwe yakaderedzwa vhoriyamu iyo ichave inowanikwa mune ramangwana maPhones.
Apple yaigona kunyangwe, nekuda kwetekinoroji nyowani, kuita shanduko dzakakura mukugadzirwa kweiyo iPhone, nekuti mainjiniya ayo aisazokwanisa kumisikidza basa ravo pane yakasarudzika bhatiri chimiro. Kunyangwe iyo smartphone iri musika wakura kudai izvo zvaizotora mugadziri akashinga kuti achinje fomu yayo yakakosha - zvakati fananei semupengo microwave dhizaini kugadzira imwe iyo yakatenderera.
Iko kugona uye kugona kwemabhatiri kune chokwadi chekuwedzera pamusoro pemakore mashoma anotevera, uye anogona kuzviita zvinoshamisa kana lithiamu-okisijeni maseru (inozivikanwawo se lithiamu-mhepo) inova yechokwadi. Se Zvisikwa kudzidza (iwe uchafanirwa kubhadhara kuti uverenge iyo izere chinyorwa) inotsanangura, Li-O2 mabhatiri anopa hupenyu hwakareba kureba kupfuura iyo lithiamu-ion zvakaenzana izvo zvino zvinofarirwa mumafoni nhare - pamwe zvakapetwa kashanu zvakanyanya, kunyangwe nyaya dzeetekinoroji dzichiripo.
Asi isu tichiri kufunga maererano neyakajairika bhatiri misimboti: mabhatiri pane anodikanwa kubhadhariswa kumusoro kubva kune mainini kupa, uyezve kumhanya pasi, uyezve tinoda kubhadhariswa kumusoro zvakare.
Imwe nzira inopihwa nehunyanzvi senge kuchaja kufamba, chirevo chakashandiswa mumawatch akawanda achidzokera kumashure makore mazhinji uye aive zvakataurwa inofungidzirwa naApple kana ichiisa pamwechete yekutanga Apple Watch. Iyo inoshandisa kinetic simba kubva kune ako mafambiro ekuchaja bhatiri sero - iyo yechinyakare modhi ingave yewristwatch kuti ishandise simba reruoko rwako kuzungunuka nekudzoka mukati mezuva rose, asi nzira dzakafanana dzakashandiswa zvipfeko zvefoni zvinopfeka iyo inogadzira simba rakaringana nenzira iyi yekupa rinowedzera awa yehupenyu kune avhareji foni kubva kungori, er, zviuru zvishanu nhanho.
Zvakanaka, saka iyo tech inoda kuvandudzwa kuti igamuchire vakawanda-musika kugamuchirwa, uye zvingave zvirinani zvakadaro kana tekinoroji yerudzi urwu ikabatanidzwa mumuviri wefoni pachayo (zvakare zvakakosha kuti ikwanise kuunganidza kukosha kwakaringana simba kubva kune madiki-madiki mafambiro anowanikwa nefoni muhomwe kana bhegi kwete pane kumagumo kweruoko). Asi inzira inokatyamadza inotsvaga yekuunganidza imwe yesimba iro rauri kupambadza pazvinhu zvakaita se'kufamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe 'uye' kukwana '.
Chikamu chakafanana chehunyanzvi chinoratidzika kunge chingangoitika mune ramangwana rinotaridzika rekuwedzera pane kutora nzira dzechinyakare dzekuchaja bhatiri solar power. Nhoroondo ye Sunpartner Technologies yakagadzira a isina ganda ganda / kesi iyo inomonera yakakomberedza nharembozha uye inounganidza simba kubva pachiedza chinowira pairi. Izvi zvakagadzirirwa kushanda zvese zvemukati uye zvemukati mwenje, asi zviri pachena zvirinani neyekupedzisira; mune chaiyo mamiriro iyo tech inogona kuwedzera mamwe gumi kusvika gumi neshanu muzana muzana kuhupenyu hwebhatiri.
Apple, hongu, yanga ichizvipira pachayo nzira yakasvibirira kwechinguva ikozvino, uye a bvumidzwa yakapihwa muna 2015 inoratidza zano iri mukuita.
Iyo patent inoratidza kuti Apple iri kuronga kuvaka maseru ezuva pasi pechigunun'una pamafoni efoni mune ramangwana. Iwo mapaneru aizochinjazve mukati mezuva uye haungazodi kubaya foni yako muhomwe zvakare. Yakanaka kune nyika, iri nyore kwatiri.
Zvakawanda zvemaseru ezuva pane yako foni pachayo. Asi inzvimbo diki yekutora simba. Ko zvakadii nepamusoro pekupfeka nzvimbo pamuviri wako?
Vatsvakurudzi veYunivhesiti vane dzakasimukira 'smart fibers' iyo inogona kushandiswa kugadzira zvipfeko zvinounganidza nekuchengetedza simba rezuva zuva rese, wozadza zvishandiso zvinotakurika izvo zviri kushomeka pasimba. Iyo micheka ine dhayi-inosimudzira zuva sero uye fiber supercapacitor, uye inogona kutemwa nekugadzirwa pasina kukanganisa kushanda kwesimba rekuunganidza maitiro.
"Kukohwa kwesimba kwakakosha," akadaro Paul Weiss, mupepeti-mukuru we ACS Nano, kuna Mashable.
“Zvipfeko zvichave zvinopa simba musimba ratinowana nekushandisa? Hatisati taziva. Asi semunda, tiri kutsvaga mazano aya kuwedzera kugadzirisa mubvunzo wekuti 'kukohwa kwesimba kungashanda sei. "
Pachine zvipingamupinyi zvekukunda zvipfeko zvezuva zvisati zvadonhera mune zvakanyanya; kune chimwe chinhu, dhayi rinoshandiswa mune ino chaiyo kuitiswa kwechimiro haina hushamwari, sekureva kwechikwata chekutsvaga, chine zvingangove zvine njodzi zvinokanganisa makemikari. Iyo micheka zvakare haina mvura.
Asi zvipe makore mashoma uye isu tese tinogona kunge takapfeka zvinhu. Rigoberto Advincula, purofesa we macromolecular science kuCase Western Reserve University kuCleveland, akafungidzira kuti chigadzirwa chekutanga chekutengesa chinoshandisa chigadzirwa chemachira ichi chinogona kuwanikwa mumakore mashanu anotevera - zvingangodaro kutanga nemauto nekunze kunyorera.
Kudzorerazve foni yakapambadza simba
Tichiri pamusoro pesimba rekukohwa magetsi, tekinoroji iripo izvozvi iyo inogona kutora simba rinoburitswa kubva mufoni yako muchimiro chemasaisai redhiyo (iwo akapambadzwa, kwete iwo akakosha pakukurukurirana) uye wozoidyisa kuti idzokere mubhatiri . Iyi haisi mhinduro yenguva yakareba: rimwe simba richarasika kuburikidza nemafungu anobuda ega, uye une simba rese riri kushandiswa kumhanyisa zvemukati zvemukati nekuvhenekera iyo skrini, pakati pezvimwe zvinhu. Asi zvinoreva kuti bhatiri rako rinodzikira zvishoma nezvishoma - 25 kusvika 30 muzana, vanogadzira vanodaro.
Aya matatu mune yavo yazvino fomu - niche, semi-kuyedza, ine mutengo, isina-kubatanidzwa, inopa yakakosha asi isina ruzivo-inoshanduka inowedzera kuhupenyu hwebhatiri uye kazhinji kazhinji zvishoma faff - haisi kunyanyisa kukwezva kune wepakati smartphone muridzi. Asi kana tikasvetukira kumberi makore gumi, pamwe zvishoma, fungidzira iyo iPhone ine ese matatu (uye akafanana akafanana tech) akavakwa zvine hungwaru mune iyo kesi: kuunganidza simba kubva kune ako muviri mafambiro, kubva kune ambient mwenje, uye kubva parunhare runoburitsa mafungu eredhiyo. Kusvika padanho rekuti hupenyu hwebhatiri hunorega kuve kunetsekana - kusvika padanho, pamwe, uko mabhatiri enhare anozvishingisa. Kufunga kwakadii.
Tine chikwereti cherubatsiro rwatakawana pakunyora mifungo iri pamusoro kuTechnology Review inobatsira pfupiso yeramangwana tekinoroji tekinoroji.
Kuzviporesa wega bhatiri tech
Tiri kuona mizhinji yekufambira mberi mumunda webhatiri tekinoroji. Yakawanda inoenderana nenzira dzinoshanda uye dzakatipoteredza dzekuchaja bhatiri. Imwe yeakanyanya kushushikana anotarisa pane chimwe chikamu zvachose: kugadzirisa bhatiri sero mushure mekunge raputsika.
Vatsvagiri paYunivhesiti yeCalifornia, inotungamirwa naAmay Bandodkar, vakagadzira mienzaniso inoshanda yemabhatiri ane magnetised particles anozvisundira kumashure mushure mekubvarurwa kuita zvidimbu zviviri senzira yekuzviporesa (Unogona verenga chidzidzo pano.)
Uye iyo nheyo haina kuganhurirwa kumabhatiri: ivo vaongorori vakaedzawo kuzvirapa-kwavo maseketi nema sensors.
Inogona here ramangwana smartphone kushandisa iyi budiriro kuzvigadzirisa pachayo mushure mekuparara kwenjodzi? Pamwe kwete, kunyangwe imwe vhezheni yacho, iri kure kure nemutsetse, inogona kuita kuti vashandi vevashandi vedu vemagetsi vakwanise kuita basa mushure mekutambura kwakakomba. (Parizvino kurapa kwacho kuri kwekushandira kwenguva pfupi pane kugadzirisa kwenguva refu.) Zvishandiso zvinonyanya kuitika, zvirokwazvo mupfupi kusvika pakati nepakati, zviri mumunda wezvinhu zvinodhura zvemagetsi zvinopfeka.
(Via Inoshandiswa Mitambo.)
Supercapacitor mabhatiri 'ayo anotengesa mumasekondi uye anopedza kwevhiki'
Chikwata chevaongorori pa University of Central Florida vauya nebhatiri diki, rakavakirwa kune supercapacitor tekinoroji, iyo inobhadharisa zvakanyanya nekukurumidza, inogara kwenguva yakareba pakati pemacharge uye ine hupenyu hwakareba hwakareba izvo mabhatiri parizvino anoshandiswa mumafoni epasi rose
Masayendisiti anoshuma kuti bhatiri diki rinoda kubhadhariswa kwemaawa mashoma chete uye rinozogara kwemazuva. Uye nepo zvakajairika lithiamu-ion mabhatiri anoratidza kudzikira mashandiro mushure memazana mazana matatu kusvika mazana mashanu emacharge akazara, bhatiri iri rakanakira 300 mhosva.
Mifananidzo yemifananidzo: ACS Nano (ruboshwe), UCF (Kurudyi)
Nitin Choudhary, nhengo yezwi rekutsvagurudza, akati kana ukatsiva mabhatiri e-smartphone nema supercapacitors, "unogona kuchaja nharembozha yako mumasekondi mashoma uye haufanire kuibhadharisa kweinopfuura vhiki".
Vatsvaguriri vakasimbisa kuti tekinoroji haisati yave padyo nemashandisirwo ekutengesa. "Asi ichi chiratidzo cheye-chirevo uye zvidzidzo zvedu zvinoratidza kuti kune zvakakwirira kwazvo kumatekinoroji mazhinji," akadaro Yeonwoong Jung, mutevedzeri wapurofesa pamwe nekugadzwa pamwe chete kuNanoScience Technology Center uye neDhipatimendi reSainzi neUinjiniya.
iPhone 9 uye kupfuura: Dhizaini dhizaini
iPhones ndiwo mubatanidzwa unouraya wekudhura uye kusimba unoguma nemarwadzo emutengi mazhinji. Mhedzisiro ndeyekuti muridzi wega wega wepa iPhone anofanira kuita dhiri rake nadhiyabhorosi: kana kuchiputira mune yakasimba kesi, nekudaro vachivhara chimiro chakanaka chavakabhadhara mari iyo yese pakutanga, kana kukanganisa panjodzi yekukuvara pese pavanotora chinhu icho muhomwe.
Izvi zvinogona kunge zvisiri izvo mune ramangwana, kupihwa huwandu hwakawanda hwesimba remuchadenga hunogara hunogona kushandiswa paPhones dze2020. Muchikamu chino tinotarisa zvigadzirwa zvekugadzira zvinogona kuita kuti iPhone 9 uye gare gare ive yakasimba kupfuura iwe yaungagone. fungidzira… pamwe nedzimwe shanduko dzinonakidza kune dhizaini yekunze.
Verenga zvinotevera: Maitiro ekugadzirisa yakatsemuka iPhone skrini
iPhone skrini yatova yakatosimba kupfuura yako yepakati girazi girazi (zvakagadzirwa neyemidziyo yezvinhu inonzi Girazi yeGorilla), asi dzimwe nguva dzinotsemuka kana kutsemuka kana dzadonha. Sapphire skrini zvinogona kuramba zvichiramba, uye Apple iri kutoshandisa sapphire kuratidzwa kweApple Watch: zvinogona kuti kambani ikozvino yakagadzirira kupinza zvinhu izvi mune yayo smartphone mutsara-up.
Runyerekupe kuronga kuvimba neApple-yakatsigirwa nesafiri chirimwa muArizona (iyo yaive nekwanisi yekugadzira mazana maviri emamirioni mashanu-masendimita emaficha eApple pagore) yakawira kuburikidza. Asi mimwe mishumo ichangoburwa inoratidza kuti yenguva refu Apple mutengesi Foxconn arikugadzirira kuvaka chayo sapphire chirimwa muTaiwan nemutengo we $ 200bn.
Read more: Chii chinonzi girazi reSafiri, uye nei iri zano rakanaka kune iyo iPhone?
Mune chimiro cheKambala, Ilshat Garipov we Yanko Dhizaini yauya nepfungwa yekupenga: smartphone inonamira panzeve yako, senge chiyeuchidzo cheBluetooth, yobva yashandura ruvara kuti rienderane nedivi rechiso chako kuti rinyatso kuve risingaonekwe.
Kutora iyo firm:
“Flexi-screen inoramba iine ma sensors akawanda inogadzira kumusoro uye inokwanisa kuendesa chifananidzo ichi mukati mefoni kuenda kunze. Inoita chamelenzi nekusanganisa nekara renhengo yeganda rako kana uchinge waripinza panzeve yako. ”
Zvakada kufanana nemota isingaonekwe iri Die Another Day. Uye, zvisina basa kutaura, ingori pfungwa panguva ino. Tinoda zano, zvakadaro.
MunaAugust 2016, zvakataurwa na Zvichida Apple iyo Apple yakaisa patent yegirazi rakakombama iPhone ine mabhatani chaiwo pamativi. Kana ichokwadi, izvi zvinogona kunge zvakaita takapopota OLED bhaa pane inotarisirwa nyowani MacBook Pro, asi nguva ichataura.
Iyo patent mifananidzo inoratidzawo yakakomberedzwa girazi skrini yakafanana neayo isu atova kuona anozivikanwa ne Samsung's Galaxy S6 kumucheto uye S7 kumucheto. Izvi zvakabatsira kukurudzira runyerekupe rwekuti Apple iri kuronga kugadzirisazve hukuru kuti iPhone iwirirane negore regumi regumi reiyo iPhone.
Chero nzira, ichafanirwa kuve yakapesana zvakanyanya nekuedza kweScams kana Apple iri kudzivirira kupomerwa kwekubiridzira. Zvakare zvakare, mazhinji mafoni emakore gumi apfuura akabvisa iyo yekutanga iPhone, saka tine chokwadi chekuti hazvingaratidze kunetsa kuApple - kunyanya sezvo patent idzi dzichiratidza kodzero yayo yepamutemo yekugadzira michina nenzira iyi.
Uchapupu hwakawedzerwa kune iyo 'yakakombama iPhone' dzidziso muna Ndira 2017, apo Japan Ratidza, mushandi wemahara weApple, akasimbisa kune Wall Street Journal [paywall chinyorwa] iyo yakagadzirira kutanga kugadzira "inoshanduka masikirini". Izvi hazvireve kune masikirini anogona kukotamiswa nemushandisi, asi kune masikirini anochinjika mukugadzira kuti agadzire kuratidzwa kunodzika pamusoro pemucheto, senge Samsung Galaxy S7 Edge.
Japan Display haina kudoma Apple nemazita, ichingotaura chete kuti iri kuvaka zviratidziro zvevamwe - asi zvichipiwa kuti Apple ndomumwe wayo, uye inonyanya kuvanzika ipapo, vazhinji Apple varindi vari kutora yavo mhedziso.
Asi kutaura nezvezvikwiriso zvinogona kukotamiswa nemushandisi…
… Kana inokwenereka iPhone
MunaNdira 2015 Apple yakapihwa patent inoratidza kuti kambani iri kuongorora pfungwa ye inochinjika iPhone (uye isu hatisi kutaura nezvemhando yeBendgate).
The bvumidzwa inoratidza kuti, nekuita iyo iPhone ichichinjika, Apple inogona kuvhura mhando nyowani yekudzora: mushandisi anogona kuvhura app nekukomberedza chishandiso neimwe nzira, semuenzaniso, kana kushandisa mukana wekudzora mutambo. Iyo inokatyamadza kana ichiita senge pfungwa iri kure.
Pamusoro pezvo, iyo inoshanduka iPhone inofanirwa kuve isingagadzike kune zvinokanganisa uye nekudaro inogara yakasimba. Asi isu tichakurukura chinhu chakakosha mune zano reiyo inoshanduka iPhone - skrini inogona kukotama isina kutyora - muchikamu che tech tech.
Muenzaniso kubva kuApple patent nyowani. Sekutaura kwemumwe wevanyora vaPatent Apple, zvinotaridzika kunge "iPhone DS"
Sekuvandudzwa, munaNovember 2016 Apple yakapihwa imwe patent yeinosemesa smartphone, zvichimutsa kumwe kufungidzira kwekuti iyo iPhone 8 kana zvichinyatsoitika iyo iPhone 9 inogona kugadzirwa neinopeta chassis.
Patent 9,485,862, Dzakasvibiswa Zvichida Apple, zvinoreva zvimwe zvinoregererwa kune 'Zvigadzirwa zvemagetsi zvine kabhoni nanotube maseketi akadhindwa': iyo kabhoni nanotubes ndiyo nzira iyo madhizaini anogona kupetwa. Yakatumirwa kumashure muna Nyamavhuvhu 2014 asi yakazopihwa musi wa1 Mbudzi 2016.
"Carbon nanotubes inogona kuve pateni yekuumba kabhoni nanotube chiratidzo nzira pane substrates," inoverengwa chikamu chepfupiso yepatent. “Nzira dzemasaini dzinogona kuramba kutsemuka kana dzakakombama. Chikamu chakakombama chekachiratidzo chekabhoni nanotube chingangoumbwa muchikamu chekafa inochinja-chinja inodarika hinji kana chimwe chikamu chinoshanduka chemagetsi. ”
Corning, iyo kambani inogadzira Gorilla Girazi, yakapindura kutyisidziro iri kuuya yegirazi yesafaya kutanga kwegore ra2015 nechiziviso cheyakaomesesa-yakaoma zvinhu zvinoumbwa nezvinhu zvakadomwa Project Phire.
James Clappin, purezidhendi weCorning Glass Technologies, akaudza varairidzi mari kuti: “Takakuudza gore rapfuura kuti safire yaikosha pakuita basa rekutanga asi haina kufamba zvakanaka payakadonhedzwa. "Naizvozvo takagadzira chigadzirwa chinopa iyo yakanyanya kukuvara kusagadzikana uye kudonhedza mashandiro eGorilla Glass 4 ine scratch resistance inoswedera pedyo nesafiri."
Apple haimbokurukura nezvezvinhu zvayinoshandisa kune iPhone skrini, asi inhau dzakanaka kune vatengi kuti vatengesi vari kukwikwidza kupa yakanakisa uye yakasimba dheu regirazi kune avo mafoni.
Verenga zvakawanda nezve Project Phire pano.
Girazi reSafiri rave kutoshandiswa pane zvisiri zveMitambo mamodheru eiyo yekutanga-gen Apple Tarisa uye pamhando dzose dze Nhepfenyuro dzeApple 2, uye Project Phire inoita kunge iri mune yepamusoro mamiriro ekuvandudza, asi isu tiri kuswedera padhuze nenzvimbo dzesainzi-fungidziro.
Graphite, iyo inoshandiswa mumapenzura akajairika, inoumbwa nemasteki emashiti ekabhoni, imwe neimwe iine atomu rimwe chete gobvu. Ichi chikonzero nei zvakanakira kunyora: zvidimbu zvakasarudzika zvinotsvedza zvoenda kubepa.
Asi graphene inyaya yakasiyana. Graphene ndizvo zvaunowana kana iwe wakangwara zvakakwana kuti uparadzanise imwe yematanho ari mu graphite, ichikusiya uine chinhu chakanyatsoita mativi maviri. Ndicho chinhu chakatetepa chinozivikanwa nemunhu, chingangoita miriyoni kutetepa kupfuura bvudzi remunhu, uye pachinhu ichocho chingangove chakasimba (zvakapetwa ka100 pane simbi) uye kondakita wemagetsi anoshamisa - kakapetwa ka1,000 XNUMX kupfuura mhangura. Oo, uye zviri pachena, zvakare.
Zvese izvo zvinoita kuti graphene ive inonakidza tarisiro yevanogadzira tech. Kunyanya zviripachena, zvaigadzira iyo inogara yakasimba yekumhara zvinhu zvechidzitiro (uye yaizozvikweretesa kune inonamira kuratidza, zvakare) kana zvirokwazvo chero chikamu chechigadzirwa; asi inogona kunyatso kuoneka mune chero echikamu chechikamu chino. Graphene inogona kunge iri yekutsiva yakanakisa yesilicon mumaprosesa machipisi, kana inogona kushandiswa kugadzira mabhatiri anobudirira uye maseru ezuva. Izvo zvinhu zvinoshamisa.
Isuwo tiri kufara kutaura kuti graphene iBritish - rudzi rwe. Yakawanikwa nachiremba-akaberekerwa mufizikisi Andre Geim kuUniversity yeManchester, uko kuri kuenderera mberi kuchidzidzwa. (Sezvineiwo, Geim ndiye chete musayendisiti kusvika parizvino kuzopihwa mbiri Nobel uye Ig Nobel mubairo. Suck it, Planck!)
Kana iwe uchida kuverenga zvakawanda nezve graphene, ndinokurudzira zvikuru iyo New Yorker chinyorwa Pane nyaya.
Ngatifambire mberi kubva pachiratidziro uye titaure nezvezvinhu zvitsva zvinogara zveimwe iPhone.
Ko zvakadii nezve kudonha-kuramba? Zvichienderana nebasa repatent, Apple iri kuronga viscoelastic zvinhu izvo zvinogona kutora zvinokanganisa. Izvo zvinhu zvaigona kuvhara Apple zvishandiso uye kuvaita vapone madonhwe zvirinani zvirinani. Iyo bvumidzwa zvingaite zvine musoro mune ese mafoni eApple uye malaptop, asi iyo iPhone ndiyo nzvimbo iri pachena yekutanga.
Iko kugona kurutsa mvura
Iyo patent yakaburitswa musi wa12 Mbudzi 2015 inoratidza yakasarudzika asi inotaridzika mhinduro kune iyo kunwisa mvura nyaya yakatambudza iPhones munguva yakapfuura (asi haifanire kumberi, kubvira iyo iPhone 7 yakarongwa IP67 isina mvura): michina iyo inoita kuti iPhone iome yega nekupomba mvura kunze kuburikidza neayo mutauri grills.
Patent application 20150326959, zvinoshamisa, inonzi DZIMBA DZINODZIDZWA KUBVA KUNO ORIFICE.
"Zviratidzo zvinotsanangurwa pano zvinonongedzwa kuchikamu chemaacoustic chakagadzirirwa kubvisa zvese kana chikamu chemvura yakaunganidzwa mukati mevhu remacoustic module," pfupiso yepatent inoverengwa.
Pfungwa yacho yakatenderedzwa nemamamojuru mukati memutauri maburi anogona kuitwa hydrophobic kusvika padanho hombe kana shoma, zvinoenderana nemutero wakashandiswa kwavari: kana mvura yaonekwa, mhosva dzinogona kuiswa pamamojuru akasiyana nenzira yekuti mvura yaizotamisirwa pamamojuru uye pakupedzisira ichidzingwa mudumbu.
Sezvineiwo, Apple yakashandisa chimwe chinhu munzira iyi mu Nhepfenyuro dzeApple 2, iyo inogona kujekesa mvura kubva mune yayo diki mutauri mhango nekuzunungusa mutauri mutauri:
Mamiriro ekunze munzvimbo ye sensor sensor
Apple ine yakashandiswa sepa patent, sekuonekwa kwa AppleInsider, iyo ine chekuita nematauri emakomba ane masikirwo enharaunda. Mukufunga maseru anokwanisa kuongorora mweya (kana mvura) mukati memhango uye nekuzivisa nezve tembiricha, oxygen kana kabhoni monoxide mazinga zvichingodaro. Yako iPhone, neimwe nzira pasi pemutsara, inogona kukunyevera nezve magasi ane chepfu padyo, kunyangwe zvingave zviri nani kukodzera kune iyo Apple Watch.
iPhone 9 uye kupfuura: Screen yekuvandudza
Iyo skrini iri yepakati peiyo iPhone uye korona kubwinya: iyo yepakati iyo yaunofambidzana nayo nefoni yako uye foni yako inokuudza nezve pasirese. iPhones hadzina nhorondo dzinowanzove neyakanakisa resolution yechiso (kunyangwe zvataurwa zvakaitwa pachinzvimbo cheayo muridzi the retina screen rating), asi dzakasimba uye dzakapindura zvakanyanya - uye dzimwe nguva Apple evens inowedzera maficha nyowani, senge 3D Touch uye Night Shift.
Apa ndipo patinoona iyo iPhone skrini ichitungamira mumakore mashoma anotevera.
Kuratidzwa kusingaperi ...
Maererano ne Wall Street Journal sosi, iyo iPhone munguva pfupi iri kutevera inogona kuratidza isina mhedzisiro - asi chii ichocho, chaizvo? Sekureva kwechinyorwa ichi, Apple ndeyekugadzirisa zvakare iyo iPhone yegumi yegumi uye kuti shanduko "dzinogona kusanganisira yekumucheto-kune-kumucheto organic mwenje-inoburitsa diode, kana OLED, skrini" isina bhatani reImba bhatani. John Gruber akataurawo pane iri kudzorerwa patsva, ichiti Apple ndeyekubvisa mabhezeri akakomberedza kuratidzwa, ichipa vashandisi neiyo iPhone inoita senge jira regirazi.
"Ndazvinzwa izvi ndakazvimiririra uye chiri kubvisa zvachose chirebvu nehuma yefoni," akadaro Gruber. “Chiso chose chichava chiratidziro. Uye iyo yeTouch ID sensor ichave neimwe nzira yakadzamidzirwa muchiratidziro. Iyo yekumberi-yakatarisana kamera neimwe nzira ichaiswa mukati mekuratidzira. Mutauri, zvese. Ma sensors ese neimwe nzira anenge ari kumashure kwechiratidziro.
"Izvo zvandisingazive, uye ini handina zano, ndezvekuti zvinoreva here kuti ivo vachadzikira chinhu chaicho chiri muruoko rwako kuti chikwane saizi yemasikirini atinawo, kana kuti vachawedzera masikirini kukwana matinji atatojaira kubata… handizive. ”
… Kuratidza kunochinja kana kukombama…
The Nikkei mushumo isu takabatana nevekare vanofungidzira kuti matsutso egore rino achaona yakakura katatu katatu iPhone kuvhurwa, uye kuti mureza wemuenzaniso weiyi trio unoratidzira yakakomberedzwa OLED skrini inokomberedza pasi pamativi. Ichi chinhu chatakatomboona pane anokwikwidza michina, senge Samsung's S7 Edge uye Cherechedzo 7; inogonesa imwe nzvimbo yechidzitiro kusvinwa pane mudziyo pasina kuita kuti iwedzere kukura, uye iwe zvakare unogona kuve nezviziviso zvakagadzirirwa kuti zvionekwe kana kumisikidzwa pamucheto wechidzitiro.
"Pachave ne4.7-inch modhi, imwe ichave 5.5 inches uye premium handset iyo ichave ingave 5.5-inches kana hombe yakashongedzwa nekrini chakakomberedzwa pamativi maviri," akadaro Nikkei, uyo "anoziva nezveApple's zvirongwa ”.
Sekutaura kwaNikkei, dzakakombama OLED skrini dzakasarudzika dzeSamsung: kana Apple ikasarudza kuenda nenzira iyi, tinogona kuzopedzisira tave mumamiriro ekuda kuziva apo Samsung inopa Apple nezvikwiriso kuti igadzire Mucherechedzo 7 mhondi. Zvakare zvakare, iyo yaisazove isinganzwisisike mamiriro makambani maviri aya akazviisa mukati mawo, mushure mekuenderera mberi vachishanda pamwechete vachitsvaga mhosva yemamirioni-mabhiriyoni emadhora vachipesana mumatare edzimhosva pasi rose.
Apple raMwari Patent 9,146,590 inoreva "chigadzirwa chemagetsi chine kuratidzwa kwakapetwa", uye inotsanangura skrini yakakombama iyo inobvumira zvimwe zvinhu zvechi skrini kuti zviratidzwe pasina kuita kuti kifaa chiwedzere kukura. (Rangarira kuti iyo mifananidzo haiwanzomiririra izvo zvakagadzirwa nemugadziri. Mune fungidziro iyo ratidziro inogona kuputira zvakatenderedza chishandiso, kana kuti kutambanudza pamusoro pemupendero mumwe seCherechedzo Edge.)
Ipo patent ichitaura nezve "inoratidzira gungano rekuratidzira", zvakakosha kuti uzive kuti ichi hachisi patent yechikona chakakombama: chikamu chinoshanduka chechiratidziro chakanamatirwa padenga remukati reimba yakavezwa yakajeka, iyo "inopa kuomarara rutsigiro chimiro chinodzivirira kushanduka ".
Asi kuchinjika kwechokwadi hakugone kubviswa kunze mune yepakati nepakati refu. Kune runyerekupe, chokwadi, kuti Samsung inogona kunge ichigadzira iyo kuratidzwa kweiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, uye kuti idzi dzinogona kuchinjika maOLED skrini - ET News anoti Samsung iri kuisa mabhiriyoni mumafekitori matsva nemidziyo yekuenderana neApple yekuratidzira odhiyo kune ayo anotevera maPhones. Uye bendy inoratidza humbowo hwepfungwa hwave hwakajairika kwemakore akati wandei.
Isu tinofunga danho rakakura kudaro rinowanzoitika kuzadzikiswa padhuze nekupera kwegumi, kunyanya kune kambani inongwarira seApple kana zvasvika pakuvandudza magadziriso ezvigadzirwa zvakagadzwa uye zvinobudirira.
… 3D kuratidzwa…
Iyo iPhone munguva pfupi iri kuuya inogona kuuya neiyo 3D kuratidzwa, maererano ne Economic Daily News, iyo inoti Apple inopa keteni shamwari TPK iri kushanda chirongwa chine chekuita ne "kushama ziso 3D skrini" - mune mamwe mazwi, 3D skrini isingade magirazi kuti ione. Kuve nekupurika pane maviri e 3D specs pese paunoshandisa foni ingangove buzzkill.
… Kana hologramu masero
Asi 3D iri chaizvo 2009, handizvo here? Tinoda kuona Apple ichienda nhanho inopfuura uye ichinyatso kutora fungidziro yedu nehologram kuratidza, ichikwanisa kuratidzira iyo skrini mufananidzo seyakaenzana mativi matatu hologram iwe yaunogona kuona kubva kumakona akasiyana uye kunyangwe kudyidzana nayo. Iwe ungatofanira kumirira kwechinguva kune ino.
Parizvino nezve yakanakisa iwe yaunogona kubata kubva kumutengi smartphone ndeye 'holographic athari', yakavakirwa tekinoroji yekutevera yeziso. Kwete chaizvo izvo isu zvatiri kutsvaga, asi zvichiri kunakidza:
Musi wa17 Chivabvu 2016, Apple yakaisa patent kuti ive neezel-isina chishandiso. Chishandiso chisina bezel chaigona kushandura misoro mishoma.
Mufananidzo unopa uye pfungwa ne Marek Weidlich inotiratidza izvo iyo iPhone ingaratidzika kunge isina bezels. Pfungwa yepfungwa inotaridzika zvakanaka uye yaizoratidza kuti Apple ichiri kugadzira munzvimbo ye smartphone.
Yakawedzera chokwadi uye VR
Kungofanana neMagic Bar (kana, sezvazvakazodaidzwa kunzi, iyo Bata Bhari) nekukurumidza yakave runyerekupe rwakakura rwakabatana ne 2016 MacBook Pro, chaicho chakawedzerwa ndeye yekutanga kukwikwidza yeiyo 2017 iPhone zororo. Business Insider inodaro Apple iri kutoshanda pachinhu chitsva chakawedzerwa chaicho, uye izvi zvakatevera a Facebook romukova umo Robert Scoble akafanotaura kuti "inoshamisa VR / AR / chokwadi chakasanganiswa chiri kuuya [ku iPhone]… uye ichiuya mukupera kwa 2017. Kupinda kwaApple munyika ino nyowani kwakafanana neapo IBM yakauya kune yega komputa yenyika. Iyo inokosha. ”
Scoble anowedzera, "Iyo yakajeka iPhone ichaisa holograms pamusoro penyika chaiye sezvinoita Microsoft HoloLens. Uchatarisa kuburikidza negirazi nenzira dzakasanganiswa dzechokwadi (funga nezvemhando nyowani yemutambo wePokemon) kungave kuri mumusoro, kana muruoko rwako. ”
Gore rino rakaratidza gore regumi rekutanga kweiyo iPhone kumashure muna 2007, uye mamwe mapundits anotarisira kuti Apple icherechedze chiitiko ichi nekuvandudza kunoshamisa. Uye chaicho chakawedzerwa chinogona kunge chiri chaicho chiratidzo chekambani chiri kutsvaga. Asi hazvina kufanana neApple kugara pane zvakapfuura; nenhamba shoma yekusiyiwa (1997's Makumi maviri Anniversary Macintosh, yatakadaidza "Inonyanya kugutsa, yakanyanyisa-kugadzirwa komputa yemunhu yakambogadzirwa", uye ichangoburwa coffee-tafura bhuku inoratidza madhizaini eApple echinyakare), kambani inofarira kutarisa kumberi pane kutarisa nhoroondo yayo.
Kana Apple iine chimwe chinhu chakakura chakarongedzerwa iyo iPhone 8 / iPhone 7s gore rino, isu tichakurumidza kutanga kuwana mhepo yayo kuburikidza nekupa-cheni kuvuza. Asi kana zvisiri, zvinokwanisika kuti AR ichafanirwa kumirira kusvikira gore rinotevera - uye iyo iPhone 9.
Kurutivi rwemberi kuratidzwa
Concept mufananidzo na Michael Shanks.
Muna Chivabvu 2014, Apple yakapihwa patent ye "Midziyo yemagetsi ine mawonesero edivi", izvo zvinogona kutungamira kumaPhones emangwana nemaonesheni akatenderedza mativi nemipendero pamwe nekumberi. Iyo patent inoratidza kuti iwo ekumadziro ekuratidzira anogona kunge ari ekuwedzera kweiyo huru yekubata skrini, uye vanogona kuve neanopindirana kana anobata-anonzwisisa zvikamu.
Apple inoratidza kuti padivi pechidzitiro nzvimbo inogona kushandiswa kuratidza maapponi eapp, kana kuita slide-to-kuvhura mashandiro, mimhanzi inoridza kutonga, mameseji kuverenga, yekufona ID, masisitimu ekudzivirira uye nezvimwe.
Samsung yakanyatso kuburitsa iyo Galaxy Note Edge, iyo ine kuratidzira iyo inoputira yakatenderedza rimwe divi reiyo smartphone. Unogona kutsvaga zvimwe nezve iyo Galaxy Note Edge pano.
Bata ID kuratidza
Apple inonzwisiswa kunge iri kuongorora mukana wekuti ubatanidze iyo yeTouch ID zvigunwe zvigunwe mukati mekuratidzwa kweiyo smartphone kana piritsi. Muchokwadi, Apple yakamisikidza patent inotsanangudza Kubata ID kuratidza kumashure muna Ndira 2013.
Iyi tekinoroji inoreva kuti iwe unogona kuisa munwe wako pachiratidziro kuti uiongorore, pachinzvimbo cheBhatani reKumba. Hatina chokwadi kana tekinoroji iyi yaive yepakutanga misiyano kuImba Bhatani scanner yakawanikwa pane iyo iPhone 5S, kana kana ikabatanidzwa neHaptics & Tactile tekinoroji kubvisa Bhatani reKumba pane ramangwana iPhone uye kuritsiva ne rakapotsa pane-skrini bhatani.
Iyo patent inotsanangudza yekubata-skrini yekuratidzira ine chigunwe-chekunzwa dura iyo inogona kushandiswa kuunza yakakwira mizhinji-mushandisi rutsigiro.
Semuenzaniso, Apple inogona kushandisa iyo yeminwe yekuratidzira kuratidza kungobvumira vamwe vashandisi kuvhura mamwe maapp. Izvi zvinogona kubatsira kune avo vane vana vanofarira kuongorora iyo iPad, semuenzaniso.
Pamusoro pezvo, Apple inogona kutora chiratidziro ichienda kumberi. Inogona kushandiswa pamwe chete nepiyano app, semuenzaniso, kudzidzisa vashandisi iyo chaiyo chigunwe kuiswa kwechiridzwa.
Mabhatani asina tsaona
Zvakangoerekana zvaitika zvekubata zvescreen zvakajairika zvekuti isu takanyatso wedzera chirevo 'Pocket dialing' kune yedu tech jargon duramazwi. Zvakanaka, zviitiko pamusoro pemakore mashoma anotevera zvinogona kumisa izvo.
Muna Chivabvu 2014, patent yakanzi "Mabhatani anogadzirirwa eMagetsi Midziyo”Yakatsanangura bhatani rinobata-bata rakagadzirirwa kudzivirira zvinopinda netsaona. Iyo patent inovhara bhatani repanyama iro zvakare rine yekubata sensor, iyo ingazive kana munwe wemushandisi uchiibata kwete pane chimwe chinhu chiri muhomwe.
Iwo mabhatani akasimbiswa muApple patent anosanganisira masimba, kurara, menyu, vhoriyamu uye akawanda mabhatani mabhatani ari epanyama pane akawanda madhijitari uye nekudaro anogona kubatwa netsaona kuisa.
Bhatani reApple rekubata ID pamba rinoshandisa tekinoroji yakafanana neiyi tekinoroji inotsanangurwa muiyi patent, asi ichishandiswawo senzira yekuchengetedza nekuda kwenzira yekutarisa yeminwe.
iPhone 9 uye kupfuura: Kamera
Iyo iPhone ndeimwe yemakamera anonyanya kushandiswa pasi rese. Chii chakachengeterwa ichi chakakosha chinhu cheiyo iPhone yeramangwana?
MunaJune 2016, Apple yakamisikidza patent yekudzivirira vanhu kurekodha pamakonzati kuburikidza nechiratidzo che infrared. Uku ndiko kugadzirisa zvichemo zvakaitwa nevanyori vevateveri vachingoburitsa mafoni avo kuti vanyore show kana konzati, pane kuzviona pakutanga-ruoko.
Iyo patent yakasangana nevamwe vatsoropodzi; nevamwe vachiti inopinda pakavanzika pavo. Vamwe vakazviona sekufamba kwakanaka kwevanyori uye avo vanoda isiri-smartphone nharaunda. Izvi zvinogona zvakare kushandiswa nenzira yekudzidzisa, ine infrared chiratidzo chinoshandiswa kupa rumwe ruzivo nezve chimwe chinhu, senge chirimwa.
Izvo hazvisati zvajeka kuti iyo tekinoroji ichashandiswa sei chaizvo, asi zviri pachena kuti Apple iri kufunga nezvayo.
Vane rombo iPhone varidzi venguva yemberi vanogona kuisa maoko avo pachinhu parizvino chinopihwa chete neyekutanga vhidhiyo makamera.
Muna Kurume 2015 Apple yakapihwa patent ye "dijiteri kamera ine mwenje wekuparadzanisa". Iyo projekiti ndeyekugadzira mwenje wekuparadzanisa system (iyo parizvino iripo chete mune yepamusoro-kumagumo vhidhiyo kamera) diki zvakakwana kuti ikwane muiyo iPhone.
Mukukosha, mwenje wekuparadzanisa unosanganisira cube inopatsanura mwenje wakagamuchirwa kuva matatu mavara: tsvuku, girini nebhuruu. Iyo cube inopa matatu emasaenzi sensors, imwe neimwe inogamuchira imwechete yevaravara chinhu. MuPhones dzichangoburwa, iyo kamera system ndeyekuti mapikisheni ayo anotora matatu matatu echinhu mavara ayo anopedzisira ave kungotora imwechete yemufananidzo sensor; izvi zvinoreva kuti ivo vanokwanisa kuzadza chete chetatu cheiyo sensor yemifananidzo uye mavara haana kunyatsoita sezvavanogona kuve.
Iyo yekuparadzanisa mwenje system ingave hombe coup yeApple. Iyo iPhone yaizokwanisa kutora mifananidzo yepamusoro-soro ine mavara chaiwo, kunyanya husiku.
Apple inoita kunge iri kuda kuvandudza kugona kwemakamera emidziyo yayo yeIOS, uye bvumidzwa rimwe chete rakaburitswa naUSPTO muna Chivabvu 2014 inoratidza kuti isu taigona kukurumidza kuona iPhones dzinokwanisa kutora "Super-resolution" mapikicha nekuda kweiyo optical mufananidzo kudzikama, iyo yatove chikamu cheiyo iPhone 6 Plus.
Iyo patent inotsanangura sisitimu inotora akateedzana mafoto pamakona akati siyanei ozvisungirira pamwechete kugadzira iyo 'super resolution' foto.
Apple haireve kuti mudziyo unotora mapikicha ese nenzira iyi. Pane kudaro, mushandisi angave nesarudzo yekushandura super-resolution modhi, zvakanyanya senge HDR nePanorama modes.
Makuhwa akati wandei anoratidza kuti Apple inoronga kuburitsa chinhu chakadai ne iPhone munguva pfupi iri kutevera, nemishumo inonongedzera kune 'DSLR-mhando' kugona uko kungamiririre yakakura kamera kusvetuka munhoroondo yekuvandudza ye iPhone.
Inochinjaniswa kamera lenzi
Apple iri kuongororawo mukana wekugadzira inochinja iPhone kamera lenzi.
MunaNdira 2014, kambani yakapihwa maviri patent anotsanangura nzira dzekubatanidza kamera module kumidziyo yakadai seiyo iPhone nePadad.
Chekutanga patent, yakanzi "Rekunze panhare kune inotakurika yemagetsi chishandiso ine akasiyana kamera lens lens", Inotsanangura chishandiso chinotakurika chemagetsi chine kadhi inobvisika iyo inobvumidza zvinonamirwa nekamera senge malenzi akareba kana ehove.
Chechipiri patent, yakanzi "Magnetic anowedzera-maalensi ane alignment ridge, ”Inopa imwe nzira yekubatanidza lenzi dzekamera nyowani ku iPhone uchishandisa magineti.
Izvo zvave kutokwanisika kushandisa inowoneka iPhone kamera lenzi, hongu, asi parizvino izvo zviri zvekunze zvishongedzo zvakagadzirwa nevechitatu mapato. Unogona kuverenga nezve yedu yekusarudza yeakanakisa iPhone kamera lens zvishongedzo pano: Yakanakisa iPhone kamera lenzi.
iPhone 9 uye kupfuura: Chengetedzo & kuvanzika
Apple yakabuda zvine mutsindo ichida kuvanzika kwevashandisi, sezvakaratidzwa mune yayo ichangopfuura tussle neFBI muUS. Asi ndezvipi technoloigcal zviitiko zvainogona kupa kutsigira izvi kumusoro?
Iyo iPhone iyo inogona kutora zvigunwe zvembavha
US bvumidzwa 20160248769, patent iyo Apple yakanyorera muna Kubvumbi 2016 uye yakaburitswa musi wa25 Nyamavhuvhu wegore rimwe chete, inoratidza kuti kambani iri kufunga nezvekuunzwa kwechinhu chekuchengetedza chingatora data rebiometric, senge mafingerprints, odhiyo, mapikicha kana vhidhiyo vhidhiyo, kubva kune chero munhu anoedza kuba iPhone yako.
Iyo patent, yakananga Biometric kutora kwekusatenderwa mushandisi kuzivikanwa, Inotsanangura kuti chishandiso "chingatarise sei kutora biometric ruzivo mukupindura kuitika kweimwe kana kupfuura maratidziro mamiriro", aya mamiriro anogona kusanganisira "kuona kwekugona kusingatenderwe kushandiswa". Inoenderera ichitsanangura kuti izvi zvichaitwa "pasina kuita kuti mushandisi asina kubvumidzwa azive nezve zvakatorwa".
Kubatsira kuona nekutsvaga pasi mbavha, iyi data iri ("mukushandisa kwakasiyana") inopfuudzwa kumaseva ekambani.
Izvo zvese zvinonzwika kunge zvinonakidza - vazhinji vedu takanakidzwa nenyaya yekuba kubatwa pavanotora selfie isingazivikanwe pawebhu webhu yepamhepo kana zvimwe - asi vamwe vangangobvunza kana vabati, vanoshambadzira kana vatevedze mutemo vangade kuisa basa iri kushandiswa kwakaipisisa, kutora yedu pachedu biometric data uye kurishandisa kurwisa isu. Mumamiriro ezvinhu akadai, Apple yakasimba track rekodhi yekudzivirira vashandisi vayo zvakavanzika ivimbiso huru; kunyangwe iyo ICloud foto inodonha aingova makore mashoma apfuura…
Kutarisana nemeso uye iris-kuzivikanwa
Muna Zvita 2014, USPTO yakapa Apple patent ine chekuita ne "wega komputa mudziyo kudzora uchishandisa kumeso kuona uye kuzivikanwa".
Parizvino iPhones uye iPads zvinogona kuvhurwa uchishandisa chete chigunwe chako, nekuda kweiyo Touch ID sensor. Asi neiyi patent, iPhones dzeramangwana nezvimwe zvishandiso zvinogona kuvhurwa uchishandisa kuzivikanwa kwechiso: zvinobudirira, kumeso kwako kunova password yako.
Munguva pfupi yapfuura, DigiTimes akafanotaura - achidudza iye wekare kufarira, "indasitiri sosi" - kuti Apple ingangoburitsa iPhones dzakashongedzerwa neris-yekuziva tekinoroji muna 2018.
Iyi runyerekupe yakadzokororwa pakupera kwaNyamavhuvhu apo Digitimes Zvinonzi iyo Xintec-yakavakirwa kuTaiwan inotarisirwa kugovera iris scanner kuApple yeiyo iPhone ichatanga muna2017, uye kuti izvi zvaizobatsira kuwedzera mari yekambani zvakanyanya.
Kana tekinoroji iyi ikapararira - uye iwe unofanirwa kutarisira mamwe mafemu kuvhura mafoni nechinhu pamberi peApple, neDigiTimes ichifanotaura kuti Samsung imwe ichaenda ikoko muhafu yepiri ya2016 - iwe unozokwanisa kuvhura yako iPhone nekupenengura yako ziso. Izvo zvinonyanya kuve nyore pane kuongorora maminwe, hazvo? Zviri kuwedzera kunakidza mune ramangwana, zvinobvumwa.
Kurwisa maitiro ekuona
Muna March 2014, USPTO yakaburitswa Apple patent kufaira iyo inogona kushandiswa kuchengetedza varidzi ve iPhone pavanenge vari mukutambudzika.
Iyo patent, yakanzi "Nhare yechimbichimbi yekurwisa uye kukundikana kutadza kuona", inotsanangura chinhu chinobatanidza software nehurongwa kugadzira iyo emergency services chikumbiro system iyo inovakira mukati kune smartphone yakaita seiyo iPhone.
Uchishandisa ma sensors eiyo iPhone, software yacho inogona kuona kana mushandisi ari mune yekukurumidzira mamiriro sekurwiswa kwemuviri kana kubonderana kwemotokari uye otomatiki anodaidzira rubatsiro. Vashandisi vanogona kuseta yakatemerwa seti yenhamba dzekubata, kana kushandisa iyo iPhone's otomatiki sevhisi kufonera yemuno nhamba 999. Iyo inogona zvakare kushandisa iyo GPS kuona nzvimbo yemushandisi uye kufonera iye wekutaurirana ari padyo.
Kuti udzivise kuwanda kwemafoni e999 achiiswa zvisina basa, sevhisi ine nzira dzinoverengeka uye matanho aripo, senge nyevero dzinonzwika kuti kuda kuri kuda kuitwa.
iPhone 9 uye kupfuura: Mitengo
Kunyange isu tichifungidzira kuti iyo iPhone 9 yaigona kutaridzika sei, zvakakoshawo kufungidzira nezve yayo yemutengo modhi, iyo inogona kuve yakapesana zvakanyanya kune iyo yatajaira isu. Musika we smartphone uri kuwedzera, kunyanya muWestern world, uye sezvo kukwikwidza kuchipisa, isu tinofungidzira kuti vanopa smartphone nevagadziri zvakafanana vachada kuyedza vatengi nezvibvumirano zvinogara zvichikwezva. Tingatomboona iyo iPhone 9 ichipihwa pachena mahara?
Kunyangwe izvi zvichinzwika kunge zvisina musoro pamusoro, pane nzira muhupengo. Vashandisi vajaira kuona kushambadza mukati mefoni yavo - pamawebhusaiti, mumaapps, zvisati (uye dzimwe nguva panguva) mavhidhiyo epamhepo - zvingangosvika padanho rekushambadzira kwe smartphone pane dzimwe nzvimbo dzinokanganisa, senge yekuvharira sikirini, mukudzosera kusarura zvishoma kana zvachose parunhare pacharo?
Tichiri imwe nzira kubva kunetiweki vanopa vachipa emahara mafoni mafoni nekuda kwekushambadzira kushambadzira, hazvifungidzike sekufunga kwevamwe. Tora Tesco, semuenzaniso - Tesco akashanda nekambani yeAustralia inonzi Unlockd iyo yakagadzira iyo Tesco Mobile Xtras app. Pfungwa yeapp iyi ndeyokuratidzira kushambadza kwakafanotenderwa paunongovhura foni yako, uye nepo izvi zvichiita senge zvinotsamwisa vamwe, kana iwe ukaona kushambadza pazuva kwemazuva makumi maviri nerimwe, unowana £ 21 kubva kubhiri rako remwedzi . Ehe, pane mutsauko pakati pe £ 3 pamwedzi uye yemahara iPhone, asi mukana uripo.
iPhone 9 uye kupfuura: Macworld ongororo - Chii chaunoda kubva kune yako ramangwana iPhone?
Inguva yako. Ndeapi eaya mazano anokufadza, kana uri kutsvaga chimwe chinhu zvachose? Wati iwe mune yedu poll.
Maitiro ekuziva kuti ndeipi iPhone modhi yauinayo
Apple iCar zuva rekuburitsa, dhizaini & mutengo makuhwa